Maaha dhaliisha cidda tirsata | Martech Zone
Sunday, May 16, 2010 Axad, Oktoobar 4, 2015 Douglas Karr
Maaha kan dhaliisha leh; maahan ninka tilmaamaya sida ninka xoogga lihi u turunturoodo, ama meeshuu wax qabadkeedu kaga wanaagsanaan lahaa. Amaanta waxaa iska leh ninka runti ku sugan fagaaraha, oo wejigiisa ay ka muuqato boodh iyo dhidid iyo dhiig, oo si geesinimo leh u dadaala; yaa qaldama oo soo noqnoqda marar badan; maxaa yeelay dadaal ma jiro qalad iyo gaabis la'aan; laakiin yaa dhab ahaantii ku dadaala inuu sameeyo ficilka; yaa garanaya xamaasada weyn, cibaadada weyn, ee naftiisa ku bixiya waxqabad u qalma, yaa sida ugu fiican ugu danbeyn ogyahay guusha guusha sare iyo qofka ugu xun, hadii uu ku guuldareysto, ugu yaraan wuu ku guuldareysto isagoo aad u dhiiran. Sidaas darteed booskiisu weligiis lama joogi doono nafahaas qabow iyo xishoodka leh ee aan aqoon guul iyo guul darro midna. Theodore Roosevelt
Xalay, waxaan goobjoog ka ahaa munaasabadda Techpoint Abaalmarinta Mira. Tani waa abaalmarin goboleed loogu talagalay bulshada teknolojiyadda ee Indiana. Abaalmarinnadu waxay ahaayeen kuwo fantastik ah oo wax weyn ayay ahayd inaan arko saddex ganacsi oo aan la soo shaqeeyay - Xaqiiqda, Imavex iyo Bluelock - lagu garto shaqada weyn ee ay qabanayeen. Ma jirto wax iska soo horjeed ah oo saddexda agaasime ee shirkadahaani ay yihiin qaar ka mid ah dadka ugu waa weyn ee aan waligay la kulmay.
Bob Compton wuxuu soo gabagabeeyay fiidkii, isagoo kasbaday Abaalmarinta Nolosha Noloshiisa, iyo bixinta tixraaca sare ee kor ku xusan. Waa xigasho uu ku haysto jeebkiisa una qaybiyo ganacsade kasta oo uu la kulmo.
Tags: editorxayeysiinta facebookaqoonsiga googleDooxada Warbaahintacilmi baaristagaaribilowga usbuucabeegsiga cimiladaWebexyoast